Zimbabwe Latest Indian News for community
Gurudas Maan With Wife
Malle Mogga Movie Trailer
Post-IPL stint, Muzarabani returns to Zimbabwe squad for ODIs vs Afghanistan
Harare, June 3 (IANS) Zimbabwe's highest-ranking bowler on the ICC Men's ODI Rankings list, Blessing Muzarabani, will make a return to the national side after coming back from the recently-concluded IPL, as he has been named in a 15-member squad for their Cricket World Cup Super League (CWCLS) ODIs against Afghanistan, starting June 4.
Category: International, Zimbabwe,Sports,Cricket
Lance Klusener re-joins as Zimbabwe's batting coach
Harare, March 8 (IANS) Months after he quit his job as Afghanistan's head coach, former South African all-rounder Lance Klusener has re-joined the Zimbabwe senior men's national team as their batting coach.
Harare, Jan 24 (IANS) Former Zimbabwe wicketkeeper-batter Brendan Taylor has made explosive claims that an unnamed Indian businessman allegedly tried to force him to spot-fix international games, threatening to make public a video of the cricketer taking cocaine if he did not submit to his command.
Harare, Jan 19 (IANS) Rehabilitation of the Kariba Dam wall, to boost power generation by the Zambian and Zimbabwean power utilities, is expected to be completed by the end of this month, the Zambezi River Authority (ZRA) has said in a statement.
Category: International, Zimbabwe,Politics
77 people die in Zimbabwean road accidents during festive season
Harare, Dec 30 (IANS) At least 77 people were killed in 1,295 road traffic accidents countrywide between December 15 and 27 this year, Zimbabwean Police has said.
Category: International, Zimbabwe,Politics,Crime/Disaster/Accident
Zimbabwe launches e-passport to enhance security
Harare, Dec 15 (IANS) Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has launched the country's e-passport aimed at enhancing security by preventing identity theft and forgery.
Harare, Dec 15 (IANS) The Zimbabwean government has extended the Covid-19 lockdown measures for two weeks to prevent the spread of the Omicron variant.
Category: International, Zimbabwe,Health/Medicine,Politics
Harare, Dec 8 (IANS) The Zimbabwean government has expressed deep concern at the growing number of Covid-19 cases in the country driven by the Omicron variant and plans to bar the unvaccinated from boarding public transport.
Harare, Dec 4 (IANS) Zimbabwe will start administering Covid-19 booster shots to frontline workers, people with chronic diseases, and the elderly with immediate effect, a senior Ministry of Health and Child Care official said on Friday.
Harare, Dec 3 (IANS) Zimbabwean Vice President and Minister of Health and Child Care Constantino Chiwenga has confirmed the presence of the Omicron variant of Covid-19 in the country.
Category: International, Zimbabwe,Health/Medicine
Zimbabwean Prez announces fresh measures to curb new Covid-19 variant
Harare, Dec 1 (IANS) Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has announced a raft of new and enhanced measures to stem the spread of the Covid-19, following the discovery of a new variant in neighbouring South Africa.
Harare, Nov 30 (IANS) Zimbabwe has launched a national HIV/AIDS strategic plan which is set to guide resource allocation and implementation of the country's HIV response for the next five years, the state broadcaster ZBC reported.
Harare, Nov 28 (IANS) Six Sri Lanka women cricketers who took part in a World Cup qualifying tournament in Zimbabwe have tested positive for COVID-19, the Sri Lanka cricket board (SLC) said on Sunday.
Category: International, Zimbabwe,Politics,Art/Culture/Books
Harare, Nov 25 (IANS) Zimbabwe's last wicket pairing got the hosts across the line against USA while Ireland and Thailand got two points on board at the ICC Women's World Cup Qualifiers here on Thursday.
Three SL players test positive for Covid-19 in Women's Cricket World Cup Qualifier
Harare, Nov 21 (IANS) Three players of the Sri Lankan team participating in the ICC Women's Cricket World Cup Qualifier 2021 in Zimbabwe have tested positive for COVID-19, said the ICC on Sunday. It also said that all three players in question, whose identities arent revealed yet, are isolating.
Harare, Oct 9 (IANS) Openers Gaby Lewis, and Leah Paul put together a hundred-run stand as Ireland chased down 179 to beat Zimbabwe by eight wickets with 11 overs to spare and take a 2-1 lead in the four-match ODI series.
Harare, Oct 4 (IANS) Zimbabwe women's cricket team is all set to host Ireland for a historic four-match ODI series, beginning here at the Harare Sports Club on Tuesday.
Covid-19 hampering Zimbabwe's elephants conservation efforts
Harare, Aug 13 (IANS) The Covid-19 pandemic has affected Zimbabwe's primary source of funding for the conservation of elephants and other wildlife, resulting in a surge in incidents of human-wildlife conflict.
Harare, Aug 1 (IANS) Zimbabwe has reopened the Victoria Falls land border with Zambia for fully vaccinated tourists to allow the smooth flow of visitors between the two neighbouring countries.
Harare, July 29 (IANS) Zimbabwe is re-introducing black rhinos to its second-largest game reserve, Gonarezhou National Park, the first time that the wildlife sanctuary will be home to the critically endangered species in nearly 30 years.
Category: International, Zimbabwe,Environment/Wildlife
Harare, July 26 (IANS) Soumya Sarkar returned figures of 2/19 with the ball before scoring a career-best 68 as Bangladesh defeated Zimbabwe by five wickets to take the T20 International series 2-1 at the Harare Sports Club.
Harare, July 23 (IANS) Zimbabwe surprised Bangladesh in the second T20 International, winning by 23 runs to stay alive in the three-match series. The victory was also the first for the hapless Zimbabweans who had lost five internationals to the tourists before Friday.
Harare, July 21 (IANS) Bangladesh, riding on a century from skipper Tamim Iqbal, defeated hosts Zimbabwe by five wickets in a high-scoring third and final One-day International at the Harare Sports Club to make a clean sweep of the series.
Harare, July 19 (IANS) The T20 International series between Bangladesh and Zimbabwe has been advanced due to the challenges faced by the tour's broadcast company, the Zimbabwe Cricket announced on Monday.
Shakib takes five, Das slams century as B'desh crush Zimbabwe
Harare, July 17 (IANS) All-rounder Shakib Al Hasan took five wickets to become Bangladesh's top wicket-taker in ODI history as they defeated Zimbabwe by 155 runs in the opening tie of the three-match series at the Harare Sports Club here.
Zimbabwe have backs to the wall in one-off Test
Harare, July 10 (IANS) Skipper Brendan Taylor's 92 helped Zimbabwe get to 140/3 in the second innings against Bangladesh at stumps on the fourth day of the one-off Test here on Saturday.
Bangladesh spinners catch Zim batsmen in a web
Harare, July 9 (IANS) Bangladesh took stranglehold of the one-off Test against Zimbabwe after spinners Mehidy Hasan (5/82) and Shakib al Hasan (4/82) ran through the home sides innings on the third day to give their side a 192-run lead on first innings.
Zimbabwe exempts SADC countries from visa requirements
Harare, July 9 (IANS) Zimbabwe has become the first country to exempt all member states of the Southern African Development Community (SADC) from visa requirements.
Demotion serves well as Mahmudullah notches career-best score
Harare, July 8 (IANS) Demotion for Mahmudullah in the batting order to No. 8 served Bangladesh well as the 35-year-old, who had scored just one century and three fifties over the last six years in Tests, racked up his highest Test score of 150 to put his team in command in the one-off Test against Zimbabwe here.
Harare, July 7 (IANS) Some provinces in Zimbabwe are facing a shortage of personal protective equipment (PPE) and healthcare workers at a time when the country is experiencing a third wave of the Covid-19 pandemic, Information Minister Monica Mutsvangwa said on Tuesday.
Das, Mahmudullah save Bangladesh the blushes
Harare, July 7 (IANS) Liton Das's 95 and his unbeaten 138-run partnership with Mahmudullah Riyad (54) helped Bangladesh end the first day of the one-off Test against Zimbabwe at 294 for eight wickets at the Harare Sports Club on Wednesday.
Zimbabwe closes highest courts over Covid spike
Harare, July 2 (IANS) The Judicial Service Commission of Zimbabwe (JSC) has announced the immediate closure of the Constitutional and Supreme Courts, following an ongoing resurgence of Covid-19 infections in the country.
Zimbabwe further tightens measures amid surge in Covid-19 cases
Harare, June 30 (IANS) Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Tuesday announced additional tighter measures to control the spread of the Covid-19 pandemic.
Zimbabwe extends localised lockdown measures
Harare, June 19 (IANS) Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa has extended the localised Covid-19 lockdown measures to three more districts following a resurgence of new cases.
Harare, June 14 (IANS) The Zimbabwean government has announced a two-week localised lockdown for Hurungwe and Kariba districts in Mashonaland West Province following a spike in Covid-19 infections.
Category: International, Zimbabwe,Health/Medicine,Human Interest/Society
SA A vs Zimbabwe A unofficial 'Test' suspended due to Covid
Harare, June 14 (IANS) The unofficial second 'Test' between South Africa A and Zimbabwe A was suspended here on Monday following the Zimbabwe government's directive to cease all sports activity owing to the Covid-19 situation in the country.
Harare, June 13 (IANS) Zimbabwe has decided to strengthen anti-CCovid-19 measures from Monday, banning all social gatherings and enforcing mandatory testing of travellers from hotspot countries, following a surge in infections and deaths in recent weeks.
Zimbabwe's national airline resumes domestic flights
Harare, June 2 (IANS) Zimbabwe's struggling airline Air Zimbabwe resumed domestic flights on Wednesday after a one-and-half year break due to operational challenges and the Covid-19 pandemic.
de Bruyn ton powers South Africa A to win
Harare, May 30 (IANS) A sizzling unbeaten century by Theunis de Bruyn helped South Africa A make a strong start to their tour of Zimbabwe as they comfortably beat the host by six wickets here on Saturday.
Zim cricketer signed up by Puma after heartfelt appeal
Harare, May 23 (IANS) Zimbabwe cricketer Ryan Burl's heartfelt appeal for sponsors seems to have borne fruit as he announced on Sunday that he has signed up with Puma.
Zimbabwe cricketer pleads for sponsor, posts picture of ripped shoe
Harare, May 23 (IANS) At a time when the world's wealthy cricket board are earning millions from sponsorship and broadcast rights, Zimbabwe player Ryan Burl has highlighted the plight of his country's cricketers, who cannot even afford decent shoes for their matches.
Bulawayo, May 18 (IANS) Handy contributions from team captain Andrie Steyn (100, 132 balls, 9x4s) and the middle order helped South Africa Women Emerging side make a strong start to their five-match one-day series on their tour of Zimbabwe with an 32-run win here on Tuesday.
Pak crush Zimbabwe by inns &amp; 147 runs to sweep Test series
Harare, May 10 (IANS) Pakistan completed formalities on Monday, crushing Zimbabwe by an innings and 147 runs on Day 4 of the second Test to make a clean sweep of the two-Test series at the Harare Sports Club.
Harare, May 10 (IANS) Pakistan's victory in the second Test against Zimbabwe made Babar Azam the country's first skipper to win his opening four Tests.
Harare, May 10 (IANS) Pakistan completed the formalities on Monday, crushing Zimbabwe by an innings and 147 runs on Day 4 and made a clean sweep of the two-Test series at the Harare Sports Club here.
Harare, May 8 (IANS) Pakistan were in firm grip of the second and final Test against Zimbabwe after Abid Ali registered an unbeaten double-century before the touring bowlers accounted for four host batsmen in the evening session of Day 2 at the Harare Sports Club on Saturday.
Harare, May 7 (IANS) Pakistan's Abid Ali struck his first Test century since December 2019 and Azhar Ali registered his 18th ton as the visitors looked set for a 400-plus total in the second Test against Zimbabwe, reaching 268 for 4 on the opening day at the Harare Sports Club on Friday.